Rahoviana no ho lany ny solika: ny vidiny sy ny vokany | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 20/07/2021 16:55 | Energie mahazatra
¿Rahoviana no ho lany ny menaka? Izy io dia fanontaniana izay napetratsika rehetra tamin'ny tenantsika tamin'ny fotoana sasany tamin'ny fiainana. Ny solika no solika fosil be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny famokarana herinaratra sy amin'ny faritra maro hafa. Voafetra ny tahirin-tsolika ary ankehitriny dia tsy manam-potoana hamelomana azy ireo indray amin'ny planeta olombelona. Ny tsy fahampian'io solika fôsily io dia manana ahiahy amin'ny zanak'olombelona.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao hoe rahoviana no ho lany ny solika ary inona no vokany.
1 Toetra mampiavaka ny solika
2 Rahoviana no ho lany ny menaka
3 Fitrandrahana solika
Toetra mampiavaka ny solika
Izy io dia fifangaroan'ny karazan-tsolika maro karazana amin'ny dingana ranoka. Izy io dia misy loto maloto hafa ary ampiasaina hahazoana solika isan-karazany sy by-vokatra. Ny solika dia solika fôsily azo avy amin'ny sombin'ny zavamananaina anaty rano, biby ary zavamaniry. Ireo zavaboary ireo dia miaina anaty ranomasina, lagoons ary vava akaikin'ny ranomasina.
Nahitana menaka tao amin'ny haino aman-jery niavian'ny sedimentary. Midika izany fa ny zavatra noforonina dia voajanahary ary rakotry ny antsanga. Lalina kokoa sy lalina kokoa, eo ambanin'ny fiasan'ny tsindry ny tany, dia ovàna ho lasa hydrocarbons izy io.
Mila an-tapitrisany taona ity fomba ity. Noho izany, na dia novokarina tsy tapaka aza ny solika, dia tsy azo tsinontsinoavina amin'ny olombelona ny taham-pamokarany. Inona koa, avo dia avo ny tahan'ny fanjifana solika ka napetraka ny daty hampihenaany. Ao amin'ny valin'ny famolavolana solika dia mihetsika aloha ny bakteria aerobika ary mihalalina ny bakteria anaerobika. Ireo fanehoan-kevitra ireo dia mamoaka oksizena, azota, ary solifara. Ireo fanehoan-kevitra ireo dia mamoaka oksizena, azota, ary solifara. Ireto singa telo ireto dia ampahany amin'ny fitambaran'ny hydrocarbon mora miova.
Rehefa voafintina ao anaty tsindry ny antsanga dia atsangana ny farafara. Taty aoriana, noho ny vokatry ny fifindra-monina, dia nanomboka nanenika ireo vatolampy porous sy permeable rehetra ny menaka. Ireo vatolampy ireo dia antsoina hoe 'vatobe fitehirizana'. Mifantoka ao ny menaka ary mijanona ao. Amin'izany no hanatanterahana ny dingan'ny fitrandrahana solika mba hamoahana azy ho solika.
Rehefa navoaka ny "Mad Max" tamin'ny 1980, dia toa tsy nofinofy siantifika ny fiheverana momba ny faran'izao tontolo izao izay hanovana ny tsy fahampian'ny solika. Ny fijalian'i Mel Gibson nandritra ny dia dia taratry ny fahatahorana ny tontolo tena izy, noho ny fiakaran'ny vidin'ny angovo, ny fandoroana ny lavadrano any Iran sy Irak noho ny ady sy ny baiko manakana.
Na izany aza, Diso i Mad Max. Tsy handany dolara an-tapitrisany ny barika misy menaka farany may eto an-tany ary ho zero ny sandany. Tsy ity no ho fotoana farany, satria efa vita io, fa satria tsy misy maniry amin'ny manaraka. Fanontaniana tamin'ny taonjato faha-XNUMX ny manahy momba ny fotoana hahalany solika. Ao amin'ny XXI, ny fanontaniana vaovao dia ny hafiriana no hanohizantsika ny fampiasana azy.
Ny tahotra solika lehibe hatreto dia mihodina manodidina ny fotoana voafaritra rehefa tampon'orinasa ny famokarana (solika tampon'isa) ary mihabe ny zary.
Hatramin'ny nakana ny barika voalohany tamin'ny solika tany Pennsylvania (Etazonia) tamin'ny 1859, tsy nitsahatra nitombo ny fangatahana. Inona no hitranga raha reraka ny lavadrano efa misy? Ity no nofy ratsy indrindra amin'ny fandrosoana manerantany. Ny solika dia nampandeha an'izao tontolo izao nandritra ny 150 taona, saingy mety tsy ny motera ekonomika intsony ao aminy folo taona izao.
Na ny OPEC, ilay cartel angano an'ny firenena mpanondrana solika, dia miaiky fa manakaiky ny fangatahana avo indrindra, izany hoe, rahoviana tampon'ny fanjifana solika ary mihena hatrany. Ny tsy nifanaraka dia ny teny.
Ny manova ny fitsipi-dalao dia ny fandrosoana farany amin'ny teknolojia. Voalohany, satria avelany hivoaka ny tahiry sy ny fampiasana hidrokarbona tsy mahazatra amin'ny rano lalina, izany no mahatonga ny faran'ny solika izay akaiky dia mihalavitra hatrany. Inona koa, ny fampandrosoana loharanom-pahalalana angovo mahatonga azy ireo hahomby kokoa. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia hanolo solika fôsily izy ireo amin'ny farany.
Mino ny OPEC fa ny fihenan'ny fangatahana manerantany aorian'ny taona 2040 no tranga mety hitranga amin'ny ho avy. Na dia fantatr'izy ireo aza fa raha ny ankamaroan'ny firenena dia mandray am-pitandremana ireo fepetra hiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro nifanaiky ny fihaonana an-tampon'ny Paris tamin'ny 2029, mety hahatratra ny fetra farany haingana ianao. Tao anatin'izany toe-javatra izany dia naminavina izy ireo fa ny fanjifana eran-tany dia hiakatra avy amin'ny barika 94 tapitrisa isan'andro ka hatramin'ny 100,9 tapitrisa barila isan'andro isan'andro ao anatin'ny folo taona monja, avy eo manomboka mihena tsimoramora.
Ny fikarohana ataon'ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana dia be fanantenana kokoa ary mandroso hatrany ny fangatahana farany ambony hatramin'ny taona 2020. Raha ny kajikajiany, Ny angovo avy amin'ny masoandro dia hisolo tena ny 23% amin'ny famatsiana an'izao tontolo izao amin'ny 2040 ary hahatratra 29% amin'ny 2050.
Na izany aza, ity fanovana ity dia tsy hitranga tampoka. Ny solika dia mbola mitaky ny 31% -n'ny fangatahana angovo voalohany manerantany (raha ny angovo azo havaozina, ao anatin'izany ny angovo angovo azo avy amin'ny angovo azo avy amin'ny angovo biomass, dia 13% ihany no misy azy), ka tsy hitranga tampoka ny fanjavonany. Ireo orinasa amin'ity indostria ity sy ireo firenena mpamokatra dia miomana amin'ny tontolo vaovao hafa tanteraka amin'ny iray fantatsika.
Ny vidin'ny solika dia niorina teo anelanelan'ny $ 60 ka hatramin'ny $ 70 iray barila ary inoana fa tsy hiakatra izany. Olana lehibe iray hafa koa ny vidiny. Miorina amin'ny marimaritra iraisana amin'ny tsena dia tsy ho avo kokoa noho ny ankehitriny izy io, na farafaharatsiny tsy hahita ilay avo $ 100 izy telo taona lasa izay. Ny fetra farany ambony dia manodidina ny US $ 60/70 isaky ny barila, satria avy amin'ity tokonam-baravarana ity dia mahazo tombony ny fanapahana ny hydraulic sy ny fitrandrahana anaty rano izay mahaliana ireo firenena mpamokatra nentim-paharazana. Ankoatr'izay, raha mihoatra ny fetra farany ambony ny vidin'ny hydrocarbons dia hampirisika bebe kokoa ny fampiasam-bola amin'ny loharanon-karena angovo hafa ary hihena ny fangatahana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa ianao momba ny fotoana hahalany ny solika sy ny lanjany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Energie mahazatra » Rahoviana no ho lany ny menaka